plunger ၏တစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ်မိတ်ဆက် - Nantong ပုရွက်ဆိတ် Machinery Co. , Ltd မှ
အချိန်: 2017-09-14 hits:
တစ်ဦးက plunger စုပ်စက် high-ဖိအားတံဆိပျကိုစာရေးကိရိယာသည်အဘယ်မှာရှိအပြုသဘောရွှေ့ပြောင်းခံရစုပ်စက်နှင့်ချောမွေ့ cylindrical plunger အမျိုးအစားတံဆိပ်ခတ်မှတဆင့် slides ဖြစ်ပါတယ်. ဒီကနေသူတို့ကိုကွဲပြားခြားနားသောစေသည် ပစ္စတင်ပန့်များ သူတို့ကိုပိုမိုမြင့်မားဖိအားမှာအသုံးပြုခွင့်ပြု. စုပ်စက်၏ဤအမျိုးအစားကိုမကြာခဏစည်ပင်သာယာနှင့်စက်မှုမိလ္လာလွှဲပြောင်းရန်အသုံးပြုသည်.
Rotary ပစ္စတင်နှင့် plunger တစ်ဦးကိုသုံးပါညှစ်ထုတ်လိုက် crank ယန္တရား တစ်ဦးကိုဖန်တီးရန် ရွေ့လျားမှု reciprocating တစ်ဦးဝင်ရိုးတလျှောက်, ထို့နောက်စုပ်စက်မှတဆင့်ဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ်အရည်အတင်းရန်ဆလင်ဒါသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်စည်အတွက်ဖိအားတည်ဆောက်ရာ. ဖျံ pumped ခံကြောင်းမီဒီယာကနေအာဏာကိုအရည်ခွဲခြားရန်ပစ္စတင်ပန့်များနှင့် plunger ပန့်များ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း. တစ်ဦးက stuffing boxor ထုပ်ပိုးမီဒီယာလွှဲပြောင်းသည်အဘယ်မှာရှိသင်္ဘောများနှင့် plunger သို့မဟုတ်ပစ္စတင်များအကြားပူးတွဲတံဆိပ်ခတ်ထားရန်အသုံးပြုသည်.
Plunger အစိတ်အပိုင်းပစ္စည်းများကို၎င်းနှင့်အတူ wear နှင့်အဆက်အသွယ်ဘို့ရွေးကောက်နေကြသည်ညှစ်ထုတ်လိုက် မီဒီယာအမျိုးအစား. component ပစ္စည်းများကြေးဝါပါဝင်သည်, ကွေးဝါ, သံမဏိ,အစွန်းခံသံမဏိ, သံ, နီကယ်သတ္တုစပ်, သို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်း
နောက်တစ်ခု: တုန်ခါ၏ကို Maintenance